बिष्णु माझिको 'चरी जेलैमा'को चर्चा किन ?
आर्टिष्ट खबर/ भदौ, काठमाडौं ।
नेपाली गीतसंगीतको क्षेत्रकी सबैभन्दा महंगी गायिका विष्णु माझीले गाउने प्राय गीत चर्चाको शिखरमा पुग्ने गरेका छन् । लोकगीत मात्र गाउने बिष्णु माझि बिशेष गरी सार्वजनिक नहुने कारणले निकै चर्चामा रहनुहुन्छ । साथै उहाँको स्वर र उहाले लिने पारिश्रमिकका कारण पनि निकै चर्चा हुन्छ ।
बिष्णु सार्वजनिक नभएको कारण आम दर्शकले खोजिरहेका हुन्छन् । अखिर गायिका बिष्णुले आफ्नो अनुहार किन देखाउन चाहानुहुन्न ? के उहाँलाई परिवारले बन्देजमा राखेको छ ? के बिष्णु अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ ? यस्ता प्रश्न बिष्णुका फ्यानहरुबाट आइरहन्छ । तर बिष्णुले एकपटक स्याङ्जाको प्रहरी कार्यालयमा पुगेरै आफुलाई कसैले बन्धकमा नपारेको र आफ्नो खुसीले आफू सार्वजनिक नभएको बताउनु भएको थियो । त्यसपछि केहि समय सामाजिक सञ्जालमा बिष्णुबारे टिकाटिप्पणी कम भएको थियो ।
अहिले पनि बिष्णुबारे टिकाटिप्पणी चलिरहेको छ, कारण हो ‘चरी जेलैमा’ तीज गीत । ‘पुतलीको भट्टी’ भाग १७ का रुपमा ल्याइएको यस गीतले यतिबेला टिकटकदेखि सामाजिक संजालसम्म चर्चा बटुलिरहेको छ । म्युजिक भिडियोसहित सार्वजनिक गीतमा सुन्दरमणी अधिकारीको शब्द/संगीत, विनोद बाजुरालीको एरेन्ज, महिमा आचार्यको कोरस गायन रहेको छ । सुन्दरमणीकै निर्माण, निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा शिव बि.कको कोरियोग्राफी छ । तीजको अवसर पारेर जथाभावी गीत सार्वजनिक भएको समयमा यो गीत मौलिक रहेको छ । विवाहित चेलिको वेदना प्रस्तुत गरिएको गीतमा खराव श्रीमानका कारण चेलिले पर्दा चेलिले पाउने पीडाहरुलाई गीतमा व्यक्त गरिएको छ । युट्युबमा १८ अगष्टमा सार्वजनिक गीतले ६ दिनमा ३१ लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । सुजन शाहीको सम्पादन रहेको भिडियो शम्भु चालिसेले छायाँकन गरेका हुन् ।
यस गीतको चर्चा हुनुमा राम्रो गीत र बिष्णुको स्वरमात्र होइन । गीतका शब्दका कारण यस गीत अझ बढी चर्चामा छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा बिष्णु माझिले आफ्नो जीवनमा मिल्ने गीत गाइन् भन्दै लेखिरहेको देखिन्छ । त्यस कारण पनि यो गीत अझ चर्चामा छ । टिकटक लगायतका झट्ट हेरिने सामाजिक सञ्जालमा क्लिप भाइरल छन् जसको क्याप्सनमा बिष्णु माझिले आफ्नो जीवनको गीत गाउनुभयो भन्दै राखेको देखिन्छ । त्यसैले पनि यो गीतको चर्चा चुलिएको हो । तर यस बिषयमा बिष्णु माझि वा उहाँको परिवारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । गीतसंगीतका कतिपय अग्रजहरुले भने गीतको शब्दलाई लिएर नहुने हल्ला फैलान नहुने तर्क राखेका छन् ।	सर्जक सुबास रेग्मीले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘ आफ्नो कला÷क्षमता र आवाजले चिनिएकी एक मात्र गायिका विष्णु माझी । उनलाइ चल्न र चर्चित हुनलाइ कुनै किसिमको नौटंकी गर्नै पर्दैन। कुनै मिडियामा आउन पर्दैन÷सामाजिक सञ्जालमा छाउन पर्दैन र युटुबे बुंगाहरुका दैलोमा धाउन पर्दैन,जे गरेकी छन सारै ठिक गरेकी छन । अनि उनि सन्ताऊन्ने सैतान जस्तै बुद्धि हीन पनि छैनन ।’ अहिले अन्य सर्वसाधारण तथा सर्जकहरुले पनि यसै गीतको बिषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखिन्छ ।
दर्शकको विश्वास टुट्न दिनेछैनः भरतमणी
नेपाल मगर संजाल क्लवको पहिलो वार्षिकोत्सव रारा किचन गल्कोपाखामा सम्पन्न
छायांकनको क्रममा कलाकार रमेश केसीको निधन
केपि ओलीले करिश्मालाई फोन गर्दै भने, परिक्षा कस्तो भयो ?
भिडियोको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै म्यूजिक भिडियो निर्देशक समाज
अमेरिकामा चलचित्र निर्देशक सुमन दाहालसहित विभिन्न व्यक्तिहरु सम्मानित
विष्णु माझीको माइतीघर पुग्यो प्रहरी
'म नेपाल हो'मा सन्तोष पृथ्वीनारायणदेखि बुद्धसम्मको भुमिका
आर्टिष्ट खबर/ असोज, काठमाडौं । सन्तोष अधिकारीको लगानी रहेको राष्
आर्टिष्ट खबर/ असोज, काठमाडौं । कमेडी च्याम्पियन सिजन–२ को उपाधि
दिनेशको स्वरमा 'चरी' गीत सार्वजनिक
नेपाली कथानक चलचित्र ''यो मेरो दिल'' को ''दिलमा तिमी'' को पहिलो गीत सार्वजनिक
संगीतकार शम्भुजीत र नव गायक किशोरको नयाँ गीत मेरी प्रेयसी
पुस्कल शर्माको नयाँ दशैं गीत दाजुभाई सार्वजनिक
आर्टिष्ट खबर/ असोज, काठमाडौं । लोकप्रिय गायक पुस्कल शर्माले नयाँ
कलाकार निशा घिमिरेको अन्त्येष्टि
आर्टिष्ट खबर/ भदौ, काठमाडौं बिगत लामो समयदेखी उपचाररत कलाकार निश
नेपाली अमेरिकन कलाकार संघमा महिला नेतृत्वः निशा अध्यक्ष, संगीता महासचिव
कलाकार शम्भुराज थापा ‘बखते’को कोरोनाबाट निधन
सुवेदीको ‘गहना’ मा नरेन र साया
चलचित्र 'लाइफ इन एलए'को गीतमा प्रताप र कविताको स्वर